"Fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin’ny Mpiandry sy Mpitandrina ny fanahinareo. " 1 Petera 2:25
"Ampahalalao ahy izay làlana tokony halehako, fa aminao no ananganako ny fanahiko." Salamo 143:8
“Samy hafa avokoa ny olona rehetra, ary ny tsirairay dia miezaka hitondra ny fiainany araka izay azony atao, araka izay ananany”. Izany teny izany, nataona mpamaky iray leon’ny zava-drehetra, dia maneho ny hevitry ny maro momba ny fitondrana fiainana. Manao izay tsara indrindra araka izay azo atao, mandeha amin’izao fa tsy manana antoka na torolalana. Tsy vaovao velively izany rehetra izany ! Efa ho telo arivo taona lasa izay, dia hoy ity mpaminany iray : “Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin’ny lalantsika avy isika rehetra” (Isaia 53:6). Ary Jesosy Kristy koa aza onena ny vahoaka, satria “nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry” (Matio 9:36).
“Tsy an’ny olombelona ny lalan-kalehany” (Jeremia 10:23). Fa Andriamanitra kosa te hampitodika ny fiainantsika any amin’ny lalana azo antoka. Ambarany antsika ao amin’ny Baiboly ny drafitra nataony hahasoa ny voariny. Manoritra lalana ho an’izay te hihaino Izy. Omeny antsika aloha ny fiaingana antsoina hoe fahateraham-baovao ; ny ahazoantsika izany dia ny finoana an’i Jesosy Kristy Zanany. Avy eo dia asehony amintsika ny tanjona, dia ny fahasambarana miaraka aminy any an-danitra. Mba hanoroany ny lalana tokony hizorana isanandro, dia mitantana antsika amin’ny alalan’ny Fanahiny Izy : “Fa na mivily ho amin’ny ankavanana ianao, na mivily ho amin’ny ankavia, ny sofinao dia handre teny ao ivohonao manao hoe : Ity no làlana, ka andehano” (Isaia 30:21). Ary manazava antsika amin’ny teniny Izy : “Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao” (Salamo 119:105).